DHEGEYSO: Haweenay cunug ay dhashay aan 4 sano u CADAYIN oo maxkamad lasoo taagey (Xaaladda ilkaha ilmaha oo halis gaartey) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: Haweenay cunug ay dhashay aan 4 sano u CADAYIN oo maxkamad...
DHEGEYSO: Haweenay cunug ay dhashay aan 4 sano u CADAYIN oo maxkamad lasoo taagey (Xaaladda ilkaha ilmaha oo halis gaartey)
(Västernorrland) 21 Feb 2020 – Maxkamad ku taalla gobolka Västernorrland ayay maanta ka bilaabatay dacwad la xiriirta dhaawacyo ilmo ka soo gaaray ilkaha kadib kolkii aanay hooyadii dhashay dar yeelin xanaannada ilkaha ee dhallaankaasi. Wiilkaasi ayaan ilkihiisa la cadayin afartii sannadood ee ugu horreeysay, middaasina oo sabab u noqotay in qalliin lagu saaro 16 ka mid ahaa ilkihiisii.
Kalkaaliyaha xeerilaaliyaha dacwaddan Ida Annerstedt oo warreeysi siisay laanta idaacadda ee P1 morgon ayaa sheegtay in dacwaddan loo soo oogey maadaama si loo xaqiijiyo masuuliayadda waalidka ka saaran ilmihiisa.
Waalid ahaan waxaad damiin ka tahay dhallaanka, middaasina oo macnaheedu tahay in dhallaanka la siiyo xanaannada ey u baahan yihiin iyada oo laga tallaaba qaadeyo da’dooda, sida ay hadalka u dhigtay.
Koos Ismaaciil Jaamac, ayaa baratay culuunta daryeelka ilkaha, waxeyna ka howlgashaa cusbital lagu dar yeelo ilkaha oo ku yaala magaalada Jönköping. Koos Ismaaciil Jaamac oo warreeysi khadka telefoonka ku siisay laanta idaacadda ee afka soomaaliga ayaa warbixin ka bixisay kaalinta caafimaadka ilkaha, iyadoona sheegtay inaaanay ka dhicin daryeelka xubnaha kale ee oogade, balse horseediba karto cudurro.
Isha: P1-morgon & Radio SwedenHadalsame Media
Previous articleDF Somalia oo rukhsaddii u diidey dayuurad tikitkeedu rakhiis yahay oo ay Kenya leedahay (Sababta)
Next articleKACAAMINTA SOCDAALKA: Ingiriiska oo QAYAXAY sida qura ee hadda kaddib lagu soo geli karo ama lagu joogi karo dalkaasi!